နာမည်ကျော်တရုတ်မင်းသား Luhan နဲ့ မင်းသမီး Guan Xiaotong တို့လက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပြီလား? – Trend.com.mm
နာမည်ကျော်တရုတ်မင်းသားအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Luhan နဲ့တရုတ်မင်းသမီး Guan Xiaotong တို့ဟာနှစ်ယောက်သားလက်တွဲနေကြတယ်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလက တရားဝင်ကြေညာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ သတင်းကြောင့် ၀မ်းသာကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို မင်းသား Luhan ရဲ့ မိန်းကလေးပရိသတ်အများစုကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ် လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်တွဲနေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်လာပြီးနောက်မှာလည်း တရုတ်မင်းသမီးရဲ့ အမေဖြစ်သူက Luhan နဲ့သဘောမတူဘူး လို့ပြောတဲ့ သတင်းတွေထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ၆ရက်နေ့ကတော့သူတို့စုံတွဲကိုသတို့သမီးဝတ်စုံရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ တွေ့လိုက်တယ်လို့ပြည်ပမီဒီယာတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရှန်ဟိုင်းမြို့က သတို့သမီးဝတ်စုံ ဆိုင်မှာမြင်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီလို့ကြေညာပြီးမကြာခင်ကလည်း
Luhan ကို လက်ထပ်လက်စွပ်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ် လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သိပ်မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာလက်ထပ်ကြတော့မယ် လို့ကောလဟာလတွေထွက်ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမီဒီယာကလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထပ်ပွဲကလည်းမကြာခင်ဖြစ်လာတော့မယ်ထင်တယ် လို့အရိပ်အမြွက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း တစ်ချို့ပရိသတ်တွေကတော့ တရုတ်မင်းသမီး Guan Xiaotong ဟာ နောက်ထပ်ရိုက်ကူးမယ့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအတွက် သတို့သမီးဝတ်စုံဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့
အပျော်အနေနဲ့ ပုံတွေမှာ ဘာတွေလွဲနေလည်း အတူတူရှာကြည့်ကြစို့ !!